Hacker Highschool - Burmese Lessons
အောက်ပါ သင်ခန်းစာများ နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်များကို ISECOM ၏ စည်းမျဉ်း ဖေါ်ပြချက်များအားလိုက်နာ၍ မည်သူမဆို အကန့်အသတ်မရှိ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကိုနားလည်နိုင်ရန် သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ် အသုံးပြုဖို့ လိုင်စင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့ website ရဲ့ လိုင်စင် ၀ယ်ယူခြင်း အပိုင်းတွင် လေ့လာကြည့်ပါ။
HHS က လေ့လာရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး မည်သည့်လေ့လာရေးကိရိယာနှင့်မဆို ညွှန်ကြားချက်ကတော့ နည်းပြရဲ့လွှမ်းမိုးမှု နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ်၊ ကိရိယာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ ဒီစာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို မည်သို့အသုံးချတယ်ဆိုတာနဲ့ တလွဲအသုံးပြုခြင်းများ အားလုံးကို ISECOM က တာဝန်ယူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
HHS စီမံကိန်းက ပွင့်လင်းတဲ့ ကြိုးပမ်းမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ဒီစီမံကိန်းကခင်ဗျားအတွက်ကောင်းကျိုးရရှိ စေတယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်တော်တို့ကို လိုင်စင် ၀ယ်ယူခြင်း၊ လှူဒါန်းခြင်း သို့မဟုတ် စပွန်စာပေးခြင်း များဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးပါ ရန် ကမ်းလှမ်းအပ်ပါတယ်။
maintained by ISECOM translated by Starry Sky
Lesson 02 - Essential Commands
Lesson 03 - Beneath the Internet
Lesson 04 - Playing with Daemons
ဤစာအုပ်၏ မူလပိုင်ရှင်မှာ ISECOM ၏ Hacker High School စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤစာအုပ်ကို ဆယ်ကျော်သက်များ၊ ရိုးသားစွာ အင်တာနက်အသုံးပြုနေသူများ စသဖြင့် ယနေ့အချိန်မှာ အင်တာနက်အသုံးပြုနေသူအားလုံးတို့သည်၊ နှောက်ယှက်ဖျက်စီးလို သူများ၊ အင်တာနက်ကိုလွဲမှားစွာအသုံးချနေသူများ၊ ရာဇ၀တ်သားများ၏ဘေးရန်မှ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ် ရန် အသိပညာ၊ ဗဟုသုတများ ရှိ စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး Hacker High School Project မှ စီစဉ်ရေးသားထားပြီး၊ ဘာသာပြန်ဆိုသူက စာရေးသူ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ထပ်တူ ရည်ရွယ်၍ မိမိနိုင်ငံမှ စာဖတ်သူများ လွယ်ကူစွာ ဖတ်ရှုလေ့ကျင့် နိုင်ရန် ၊ Hacker High School ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဤစာအုပ်အား စီးပွားဖြစ်အသုံးပြု ခြင်း၊ လွဲမှားစွာအသုံးချခြင်းများ မပြုကြပါရန် မေတဿတာရပ်ခံပါသည်။ ဘာသာပြန်ဆိုမှုတွင် ဘာသာပြန်ဆိုသူ တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားဘာသာပြန်ဆိုထားပြီး၊ အချို့ မွေးစားအသုံးအနှုန်း များနှင့် ၎င်းတို့ ရေမြေအကြောင်းခံသောစာပိုဒ်အချို့ကို မူလဘာသာစကားအတိုင်း အသုံးပြုထားပါသဖြင့်၊ လိုအပ်ချက်များရှိပါက ဘာသာပြန်ဆိုသူထံ email ဖြင့် ဆက်သွယ် အကြံပြုပေး နိုင်ပါသည်။
Dedication From The Translator
The owner of the book beingahacker is the Hacker High School project of ISECOM.
They intend to protect teenagers and every innocent people who are using internet from the malicious people, criminals and so forth. The translator translated it into Burmese language under the right of Hacker High School and also intends of the same way as the owner do and also intend Myanmar people to be ease of reading. Therefore, the translator would like to ask for don't use the book for sale and any form of missed-use. In the translation the translator translated as far as he can and used the original terms for some of their traditional stuffs and some technical words,thus suggest and comment by the email, if there would be some suggestion to the translator.